कर्पोरेट घटनाक्रम लागि खाद्य र पेय विचार - समाचार नियम
कर्पोरेट घटनाक्रम लागि खाद्य र पेय विचार
तपाईं एक कर्पोरेट घटना आयोजना हुनुहुन्छ जब सबै रूपमा सजिलै सम्भव रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ. तपाईं प्राथमिकता हुनुपर्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक को एक यस्तो घटना मा खाना र पेय छ. प्रदान गुणस्तर र खाद्य मात्रा र पिउन घटना यस प्रकार को आयोजकहरु बारेमा धेरै भन्छन्. यी घटनाहरूको प्रकार मा धेरै उपस्थित जो तपाईं ठीक आफ्नो अतिथि को हेरचाह छैन भनेर एउटा चिन्ह छ घटना भोक छोडेर गुनासो. यी केही खानेकुरा र कर्पोरेट घटनाहरु लागि विचार पिउन.
तपाईं एक भोजन घटना हुँदा, विभिन्न उपस्थित विभिन्न आवश्यकताहरू हुनेछ. तथापि, यस्तो चिया र कफी रूपमा पेय पदार्थ सहित अतिथि भेटी केही मिनी-नाश्ता द्वारा सुरु. बढी पर्याप्त भोजन दिन पछि आपूर्ति गर्नुपर्छ. यो एक पटक फेरि मिठाई र अन्तमा चिया वा कफी अनुगमन गर्नुपर्छ.
ककटेल वा पेय पार्टी
यस प्रकारको कर्पोरेट घटना गेट-को अन्य प्रकार भन्दा कम औपचारिक छ. तथापि, तपाईं अझै पनि खाना प्रशस्त प्रदान गर्न र एक ठूलो छाप बनाउन पिउन गर्नुपर्छ. सम्बन्धित खाद्य र पेय संग एक THEMED रात बस मुक्त पेय प्रदान भन्दा बढी मनोरंजक हुन सक्छ.
घटना यस प्रकार धाउन उपस्थित आफ्नो स्वतन्त्र समय दिइरहेका छन्. तिनीहरू मुक्त पट्टी पहुँच आशा. यो पल्ट यी मानिसहरू पिउन रुचि पेय सबै समावेश गर्नुपर्छ. केही गैर-रक्सी पिउने पेय चाहनुहुन्छ हुनेछ, केही नियमित पेय लीन हुनेछ, जबकि अन्य ककटेल कुरा थप extravagant यस्तो चाहनुहुन्छ हुनेछ.
उपस्थित शायद घटना यस प्रकार मा एक पूर्ण खाने आशा छैन. तथापि, तपाईं सबै सहभागी आवश्यकताहरू अनुरूप नाश्ता प्रशस्त प्रदान गर्नुपर्छ. सम्झनु, केही मानिसहरू एलर्जी छ वा केही खाद्य पदार्थ खान छैन. यो खातामा लिएको हुनुपर्छ र वैकल्पिक खाने विकल्प तपाईंको घटना उपस्थित गर्नेहरूलाई उपलब्ध गर्नुपर्छ.
सम्मेलन कर्पोरेट घटनाहरु अन्य प्रकार भन्दा बढी समय लाग्न. यो उपस्थित दिन भर बढी खाद्य र पेय आवश्यक अर्थ.
यी घटनाहरू सामान्य बिहान सबेरै सुरु. धेरै अवस्थामा, उपस्थित लामो दूरी यात्रा र मा पाइने एक जस्तै एक कर्पोरेट घटना केन्द्रमा एकै रातमा रहन www.chateaupolonez.com. यो मामला हो भने र आफ्नो उपस्थित हस्टन एक कर्पोरेट घटना केन्द्रमा रहिरहेका छन्, तपाईं गर्नुपर्छ निश्चित तिनीहरूले एक व्यापक नाश्ता दिन सुरु. पेय पदार्थ र नाश्ता दिन भर प्रदान गर्नुपर्छ.
खाजा खाने समयमा, एक अधिक व्यापक भोजन आवश्यक छ. यो सामान्यतया कम्तिमा तीन पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ. दिन progresses रूपमा, उपस्थित एक पेय र केही नाश्ता हुन सक्छ भनेर छोटो विश्रामहरू लिएको हुनुपर्छ. कुराको व्यापार पक्ष पूर्ण भएको छ सम्म यो कार्यवाही मा कुनै पनि रक्सी परिचय छैन शायद बुद्धिमानी हो.
एक पटक सम्मेलन समाप्त, केही मुक्त पेय भेटी उपस्थित संग थप बांड प्रभावकारी तरिका हुन सक्छ. घटना दिन को एक नम्बर भन्दा ठाँउ लिन्छ भने यो अझ उपयुक्त हुन सक्छ.
सबै कर्पोरेट घटनाहरू नै हुन्. यो तपाईं उच्च गुणस्तरीय खाना को एक उपयुक्त राशि प्रदान गर्न र आफ्नो उपस्थित लागि पिउन अर्थ. यो कहाँ कम खाना र पेय आवश्यक छ छोटो घटनाहरू पूर्ण दिन घटनाहरू दायरा. उपायहरु माथि बारेमा राम्रो निर्णय गर्न मदत गर्नेछ के खाना र पेय तपाईंको अर्को कर्पोरेट घटना मा प्रदान गर्न.
← नयाँ दबाइ निराशा व्यवहार भन्दा कम मा 24 घण्टा ! [भिडियो] भांग साँच्चै आफ्नो बुद्धि कम गर्छ? →